Gmail အကြောင်းသိကောင်းစရာ - Page4- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - Gmail အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဟုတ်ကဲ့ Inbox ထဲက Mail တွေနဲ့ chat history တွေကို delete လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင် ပြန်ပြီတော့ရှာလို့ရပါသေးတယ် ဖျက်ပြီးသားမေးလ်တွေဟာ ဘယ်ဘက် compose mail ရဲ့အောက်ဆုံ6းmore ထဲက Trash ထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်...နောက်တစ်ခုက မိမိအကောင့်ကို Account Settings ->My Product-Edit လုပ်လိုက်ရင်တော့ ပြန်ယူလို့မရတော့ပါဘူး...
နောက်တစ်ခု အ၀ါလိုင်းနဲ့ဆိုတာက ကျနော်လဲ မသိဘူး ခင်ဗျာ ကျနော့်ဆီမှာလဲပေါ်နေတယ် အဲဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကိုသိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ လေးစားစွာဖြင့်
မေစံပယ်ဖြူ, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, g00gle, htun30
ပို့စ် 115 ခုအတွက် 491 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
[quote=မြန်အောင်သား;219029]ဟုတ်ကဲ့ Inbox ထဲက Mail တွေနဲ့ chat history တွေကို delete လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင် ပြန်ပြီတော့ရှာလို့ရပါသေးတယ် ဖျက်ပြီးသားမေးလ်တွေဟာ ဘယ်ဘက် compose mail ရဲ့အောက်ဆုံ6းmore ထဲက Trash ထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်..
ွှTrash ထဲမှာလည်း delete လုပ်လိုက်မိပါတယ်.. ပြီးတော့ my product မှာလည်း edit လုပ်ပြီးတော့ နံမည် change လိုက်မိပါတယ်.. မရတော့ဘူးထင်ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မေစံပယ်ဖြူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မေစံပယ်ဖြူ
ကျေးဇူးပဲ..နောက်လည်းရေးပေးပါဦး........မသိတာလေးတွေသိရလို့ အခြားသော အကြောင်းတွေရှိရင်လည်း ရေးပေးပါဦး..... စာမဖတ်ဖြစ်တော့....အကြော်ဆရာတို့ ဒီလိုရေးမှ အသစ်တွေကိုသိရတာ.....လေ့လာနေတုန်းဆိုတော့ဘာမှ မရေးပေးနိုင်ဘူး....အားကျတယ်ဗျာ
အာ.....ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ပါဗျ.....အခုရေးနေတဲ့လူတွေကို အားကျတယ်....သူတို့လိုပဲ..ကျွန်တော်လည်း ရေးတတ်ချင်တယ်....ကြိုစားပါဦးမယ်ဗျာ....အခုတော့ သူများရေးတာတွေကိုပဲ လိုက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်:fp:
Last edited by phoeaung; 07-12-2011 at 02:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ phoeaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by phoeaung
14-01-2012, 12:26 AM
Gmail မှာ Exe ဖိုင် တွဲပို့နည်း။ အဲ့ဒီ့ နည်းကိုသုံးတာ ဘယ်လိုမှမရဘူး။ဖိုင် ပြောင်းတာတွေ ကတော့ရတယ်။ပို့လိုက်ရင် ၂၅အမ်ဘီ ဖြစ်နေလို့ မရပါတဲ့။အဲ့ဒါဘဲပြနေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ။ကျေးဇူးပြုပြီး။kingmen007@gmail.com သို့ ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါအပ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ရာဇာလင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ရာဇာလင်း
ကိုရာဇာလင်း ခင်ဗျာ 25 MB လောက်ဆိုရင် fileflyer နဲ့ရမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ...စမ်းကြည့်ပါအုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် ပုံလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ သွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...language ကိုလဲ ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ် ကျနော်ကတော့ Russian နဲ့ပြထားပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
မှတ်ချက်။email address ရေးတဲ့ အခါမှာတော့ @gmail.com ပါ ထည့်ပေးရမှာပါ
မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, g00gle
ဒါကတော့ gmail ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလေးတစ်ခုပေါ့နော် ကျနော်လဲ မကြာသေးခင်ကမှ သိလို့ အားလုံးလဲသိအောင် gtalk ချစ်သူတွေ အတွက် ပြန်လည် ဖောက်သည်ချတာပါ ..၀န်ဆောင်မှုဆိုတာတော့ ကိုပို့ချင်တဲ့ သူဆီကို ပို့ချင်တဲ့ ရက်စွဲ ပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာ မေးလ်ပို့လို့ရပါပြီ...ဥပမာ-ကိုက လဲ မအားဘူးပေါ့ ကိုယ့် ချစ်သူက လဲ မအားဘူး သူ့မွေးနေ့(ရက်အတိအကျ)မှာ ကိုက မေးလ်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုပို့မယ့် အချိန်ရယ် ရက်စွဲလေးရယ်ကို ပေးပြီး ပို့လို့ရပါပြီ...အရင်ဆုံး ဒီလင့်လေးကိုနှိပ်ပြီး firefox မှာ install Boomerang ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် firefox ကို restart ချပါ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် ကိုရဲ့ gmail account အကောင့်ကို log in ၀င်ပြီး ခါတိုင်း မေးလ်ပို့နေကျအတိုင်း msg တွေ subject တွေ ဖြည့်ပါ ပြီးရင် အောက်ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း send later ကို နှိပ်ပြီး ပို့မယ့် အချိန် ရက်စွဲ တွေကို ဖြည့်ပါ ...အားလုံးသေချာပြီဆိုရင် comfirm ပေးလိုက်ပါ ...ပထမဆုံးအကြိမ် စာတစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ် allow ပေးလိုက်ပါ...ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့မေးဟာ ကိုယ့်ပို့ချင်တဲ့ အချိန် လက်ခံသူဆီကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်....မေးလ်တွေကို ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Manage scheduled message ကနေ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ် ဒီ boomerang သုံးတဲ့ ပထမဆုံးတစ်လမှာ စောင်ရေ အကန့်အသတ်မရှိပို့နိုင်ပါတယ်တဲ့...သတ်မှတ်လ ကျော်သွား၇င်တော့ တစ်လကို ၁၀ စောင်ပဲ ပို့လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...အဆင်ပြေပါစေ gtalk ချစ်သော လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ
ငါမှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်(အောင်လတော့ မဟုတ်ဘူး မြန်အောင်သား )
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖူးလေး, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, azp09, bagothar85, g00gle, microsoft, putty
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို အခုလိုသိရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ အစ်ကိုညီလေးအရမ်းသဘော ကျပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မိုးမင်းဝင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မိုးမင်းဝင်း
ဂျီမေးလ် တွင် ဖျက်ထားသော မေး အဟောင်းများကို ဘယ်လို ပြန်ခေၞလို့ ရပါသလဲ ခင်ဗျာ..
အရေးကြီး လို့ ပါ...
19-03-2012, 12:55 PM
အကို ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါမယ် Personal >More> Trash > ကိုသွားပါ ရှာကြည့်မေးတွေများနေလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ Google ဘေးက in:trash စာရဲဘေးနားမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့သူရဲ့ မေးကိုထည့်ပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်.......
ဖူးလေး, မြန်အောင်သား, g00gle, nyinyi mt
trash ထဲမှာလည်း ဖျက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်.... အဲဒါ ဘယ်လို ပြန်ရနိုင်ပါမလဲ
Trah ထဲမှာပါ ဖျက်ပြီးသားဆိုရင်တော့ ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး ကို nyinyi mt ခင်ဗျ
မိုးတိန်, မောင်ပေါ်ဦး, g00gle, nyinyi mt
https://mail.google.com ဖွင့်လိုက်ရင် " The site's security certificate is not trusted! " ဆိုပြီးဖွင့်မရတော့ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဒီလိုဖြစ်တာသုံးရက်လောက်ရှိပြီ။ IE , Fire Fox , Chrome အားလုံးဖွင့်မရဘူး။ ကူညီပါဦး။
Originally Posted by alicia5556
ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဘူးတယ်ခင်ဗျ ဘာလို့ ဖြစ်လဲဆိုရင်မိမိကွန်ပြူတာက နေ့ရက်အချိန်နာရီတွေလွဲနေလို့ ပါ အဲဒါတွေပြန်တိုက်ပေးလိုက်ရင်ဝင်ရပါပြီ၊ နေ့ရက်အချိန်ကဘာလို့လွဲလဲဆိုရင် ကိုယ်မကလိဘူးဆိုရင် cmos ဓာတ်ခဲအားကုန်တာပါ၊
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, alicia5556, azp09, g00gle
22-03-2012, 12:26 PM
နေ့ရက်အချိန်နာရီတွေမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မရဘူး။နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးများရှိသေးလား ။ ကူညီပါဦး။ ဂျီမေးလ်စစ်စရာလေးရှိလို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ alicia5556 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-04-2012, 03:28 PM
ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ လေ့လာပြီစမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး အဆင်ပြေပါစေ။
Cookies တွေကိုဖျက် ပြီး၇င် restart ချ ပြီးတော့ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး.... firefox နောက်ပိုင်း version မှာ Cookies ဖျက်ဖို့ ဆို၇င် option> Privacy > History အောက်က Firefox Will ရဲ့ဘေးမှာ remember history ဆိုတဲ့ မျှားလေးကို နှိပ်ပြီး အောက်ဆုံးက use custom setting for history ကိုခေါ်ပြီးပုံပါအတိုင်း show Cookies ကိုနှိပ်ပါ
ပြီး၇င် remove all cookies ကိုနိပ်ပါ....( အဲဒါက နောက်ပိုင်း version firefox browser တွေမှာ cookies ဖျက်တာပါ... အကယ်၍ old version တွေဆို၇င်တော့ setting အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်) ပြီး၇င် computer ကို restart ချပြီးတော့ ပြန်ဝင်ကြည့်ပါဦး....
မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, bagothar85, g00gle, microsoft, tu tu
သူများဆီ ပို့ပြီးသားမေးလ်ကို ပြန်ဖျက်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဖူးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - သူများဆီ ပို့ပြီးသားမေးလ်ကို ပြ
here google administrator password .7$!x#8g!!8^ .go n delete it at their server b4 fri read..
မရလောက်ဖူး ဖူးလေးရဲ့ gogle mail server တွေရဲ့ admin password တွေမှ
ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တာ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းဆီကို pls ignore
ပါဆိုပြီးဘဲထပ်ပို့ပေးပါ မဟုတ်လဲ resend with correct subject n body blur blur ပေါ့...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
24-05-2012, 11:49 AM
ဂျီတေ့ာကနေ ဗွီဒီယိုနဲ့ဗွိုက် ချက်အတွက် ဘာပရိုဂရမ်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။
30-05-2012, 01:28 AM
ခင်မင်ရပါတဲ့ ကိုတင်ဆန်းခင်ဗျာ ...ရူပါလန်းတဲ့သူတွေကတော့ ဗွီဒီယိုချက်လေးတွေ ချက်ချင်တာပေါ့နော်...ကျနော်တို့များတော့ ချက်ချင်လို့တောင် မချက်ရတဲ့ဘ၀ ရူပါက မလန်းလို့ ...အလကားနောက်တာပါ... ဗွီဒီယိုချက်နဲ့ voice chat အတွက်ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်လေးမှာ ကြည့်ပေးပါနော် သေချာ စုံစုံလင်လင်လေး ရှင်းပြထားတယ် ပုံလေးတွေနဲ့ လဲပြထားတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Festoon beta ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့လဲ skype တို့ gtalk တို့ကနေ ချက်လို့ရပါတယ်...အဓိကတော့ webcam ကောင်းကောင်းလေးပဲ လိုတာပါ
အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလို့ရပါတယ် festoon Festoon 1.3.127 Beta
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, g00gle, maJunior, putty, tu tu, Ye Aung
17-10-2012, 02:32 PM
ပြန်စာ - Gmail ၏ ဟာကွက်များအကြောင်းဆွေးနွေးရ&#
တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါနော်.. gmail ကို ဖွင့်တာ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တန်းပီး In Box ကျလာတယ် အဲီထဲမှာ chat ဆိုတာလည်း မပါ လာဘူး အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် မသိလို့ ရှင်းပြပေးပါနော် သူငယ်ချင်း များကို ကျေးဇူး တင်လျက်........
17-10-2012, 03:13 PM
ပြန်စာ - Gmail ၏ ဟာကွက်များအကြောင်းဆွေးနွေးရ&a
ညာဖက်က ခွေးသွားစိတ် >> Settings >> Chat >> Chat On >> အောက်ဆုံးက Save Changes ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
နီလာချစ်သူ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, bagothar85, htun30, kyawminkhoung, tu tu
ပြန်စာ - အင်တာနက်ကfree call ဆက်လို့ရလား
အင်း ကျနော့်ကို တစ်ခုလောက်အကူအညီပေးကြပါလား ကျနော့အကောင့်ကနေ ၀င်စာတွေကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ ချက်တင် ၀င်ထားတုန်းက ပြောထားတာတွေကို ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် ချက်(အင်္ဂလိပ်လို)စာလုံးလေးပျောက်နေလို့ပါ သိတဲ့ ကိုကို၊ မမ၊ ညီ၊ ညီမ များ ပြောပြပေးပါအုံး။
Find More Posts by ကျော်မျိုးဦး
29-11-2012, 05:02 AM
Originally Posted by ကျော်မျိုးဦး
အင်း ကျနော့်ကို တစ်ခုလောက်အကူအညီပေးကြပါလား ကျနော့အကောင့်ကနေ ၀င်စာတွေကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ ချက်တင် ၀င်ထားတုန်းက ပြောထားတာတွေကို ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် ချက်(အင်္ဂလိပ်လို)စာလုံးလေးပျောက်နေလို့ပါ သိတဲ့ ကိုကို၊ မမ၊ ညီ၊ ညီမ များ ပြောပြပေးပါအုံး။
ညာဖက်က ခွေးသွားစိတ် >> Settings >> Labels >> Chats မှာ hide ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်။ show ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။
ပို့စ် 32 ခုအတွက် 69 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ွGmail Inbox ထဲက ဖိုင်တွေကို Label ခွဲထားချင်ပါတယ်.. .. Label ထဲထည့်ပြီးရင် Inbox မှာ မကျန်စေချင်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းပြပေးကြပါ Inbox ထဲ မှာလည်ကျန်နေလို့ပါ..ဖျက်ရင်လည်း ၂ခုလုံးဖျက်သွားလို့အဆင်မပြေဘူး.. နားလည်တဲ့သူများ..ကူညီပေးကြပါ..
Find More Posts by taryar@gmail.com
25-09-2014, 03:57 AM
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် မေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော့မှာ အီးမေးလ် ၂ ခုကို အကောင့်တစ်ခုတည်းကနေ delegated အဖြစ်နဲ့ သုံးနေပါတယ် delegated အဖြစ်သုံးနေတဲ့ အီးမေးလ်ရဲ့ ပတ်စ်ဝပ်ကို မမှတ်မိတော့ပါ ကျွန်တော်ပြန်ပြီး ခွဲသုံးဖို့လုပ်တာ ယခင်ပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုပေးတာ ဖုန်းထဲကို message မ၀င်ဖြစ်နေပါတယ် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိတဲ့သူများ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2015
မင်္ဂလာပါ ကျ​နော်​အားညီပါ adminနှင့်​ညီအစ်​ကိုများ ခင်​ဗျာ
ကျ​နော့်​ gmail pasword ​လေး​မေ့သွားလို့ပါ အဲဒါ recovery mails လည်းမမှတ်​မိ​တော့လို့ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲဆိုတာ ကူညီ​ပေးပါအုံးလို့
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အားညီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by အားညီ
အခုနောက်ပိုင်း recovery mail နဲပဲ ပေးလုပ်နေတယ် ဂူးဂဲလ်က....
gmail drive ရဲဒင် Applications 15 13-09-2008 09:38 PM